LG G9 ThinQ, हामी अर्को प्रमुखबाट अपेक्षा गर्न सक्दछौं Androidsis
LG G9 ThinQ, हामी अर्को प्रमुखबाट के आशा गर्न सक्दछौं
हामी लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौं एलजीले हामीलाई नयाँ फोनबाट फेरि चकित बनायो। हालका वर्षहरूमा, कोरियाली फर्मले मध्य-दायरा र अभूतपूर्व टर्मिनल सुरूवातमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचायो, यदि यो टेलिफोनी सेगमेन्टमा अंशको हिस्सा लिन चाहन्छ भने।
जी श्रृंखला प्रकार राखिएको छ, विशेष गरी LG G8 ThinQ, स्मार्टफोनमध्ये एक धेरै इकाइहरू बेच्दै थियो, तर जसको प्रतिस्पर्धाले यसलाई महिनौं भैरहेको थियो। सामसु and र Huawei धेरै अगाडी संग, योजना २०२० ढिलो वा २०२० को शुरुमा कडा परिश्रम गर्ने योजना छ, त्यसैले ऊ उन्नत भयो कम्पनीको सीईओ।
एलजी संग एक प्रीमियम मोडेल शुरू गर्न चाहन्छ LG G9 ThinQहाइलाइट गर्नु भनेको सामसु'sको ग्यालेक्सी S20 र Huawei P40 वा P40 प्रो को तिकड़ी जान्नु हो। कम्पनी सामान्यतया बार्सिलोना मा मोबाइल विश्व कांग्रेस को समयमा प्रदर्शन गर्दछ र यो घटना मा नयाँ झण्डा हेर्न अस्वीकार हुनेछ।
1 यसमा चार क्यामेरा हुनेछन्
2 अर्को प्यानेलमा शर्त लगाउनुहोस्
यसमा चार क्यामेरा हुनेछन्
मध्ये एक LG G9 ThinQ को ज्ञात डेटा हुनेछ चार सेन्सरको समावेशीकरण, त्यसैले यो मुख्य एक, एक अल्ट्रा वाइड एक, एक टेलीफोटो लेन्स र अन्तिम एक गहिरो शर्त। यी सुविधाहरूको टर्मिनलका लागि न्यूनतमसँग कम्तिमा 64 108 मिलियन पिक्सल र १० XNUMX MP सम्म हुनेछ, जुन मितिमा ज्ञात अधिकतम हो।
अर्को प्यानेलमा शर्त लगाउनुहोस्
OLED प्यानलको खराब प्रदर्शन देखेर, LG ले बिभिन्न प्रकारको एक माउन्ट गर्न सक्दछ र चमक र रंग सटीकताको लागि सुपर AMOLED को छनोट गर्न सक्छ, यद्यपि यो डिस्पोजेबल हो। OLED उल्लेखनीय रूपमा G8 ThinQ मा सुधार भयो र यदि यसलाई अन्तमा सुधार हुँदैछ भने यसलाई हेर्न बाँकी छ।
El LG G9 ThinQ bezels को साथ एक डिजाइन प्रस्तुत गर्दछ धेरै पहिलेको मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ र स्क्रिनको सबै पक्षमा डिजाईन एक समान राख्दै। यो 6,7 देखि 6,9 इन्च हुनेछ, आकार सामसु'sको ग्यालक्सी नोटसँग मिल्दो छ।
अघिल्लोको रिलिज मिति थाहा पाउँदा, हामी फेब्रुअरीमा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेसमा यस बारे केही थाहा पाउने सम्भावना भन्दा बढी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » LG G9 ThinQ, हामी अर्को प्रमुखबाट के आशा गर्न सक्दछौं
साँच्चै? POOR PERFORMANCE !? मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि यसले वास्तवमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ, मेरो लागि २०११ को सर्वश्रेष्ठ स्क्रिन S2019 पछि र नोट १०++ एलजी जी that को हो। लेखको कस्तो दुर्गन्ध हो, के तपाईंलाई थाहा छ कि एलजी जी the ले संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको प्रतिस्पर्धीहरूलाई गरेको बिक्रीलाई थाहा छ? के तपाईंलाई थाहा छ LG LG South दक्षिण कोरियामा सब भन्दा बेच्ने उपकरण हो? म त्यहाँ छोड्छु, दिमाग।
Engelbert लाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा बेच्ने 5G उपकरण। 😉